War deg deg ah:Qarax bam oo khasaare dhaliyey oo ka dhacay Nairobi(VIDEO) – SBC
War deg deg ah:Qarax bam oo khasaare dhaliyey oo ka dhacay Nairobi(VIDEO)
Qarax khasaare naf geystey ayaa saacado ka hor xaley galinkii dambe wuxuu ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimada Kenya, ka dib saacado uun markii safaarada Mareykanka ee Kenya ay shaacisey inay heshay warar la isku haleyn karo oo muujinaya qaraxyo lala maagan yahay dalka Kenya.
Qaraxan oo ahaa bam nooca gacanta laga tuuro ayaa lala beegsadey club lagu caweeyo habeenkii (Night Club), waxaana la xaqiijiyey in dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen 13 qof, sida laga soo xigtey saraakiisha Booliiska dalka Kenya.
Club-ka la weeraray oo lagu magacaabo Mwauras club ee ku yaal magaalada Nairobi ayaa waxaa wararku sheegayaan in nin watey bambada gacanta uu ku tuurey isla markaana uu baxsadey.
Afhayeenka Booliiska dalka Kenya Eric Mugambi ayaa sheegay in qaraxasi cidii ka dambeysay ay wadaan baaritaankeeda, waxaase uu sheegay inay filayaan in Al-Shabaab ay ka dambeyso, isagoo xusey in qaraxu uu dhacay 3-dii habeenimo xiliga geeska Afrika taasi oo u muuqanaya in qofka qaraxa geystey uu bartilmaameystey xiligaasi oo ah mid aad loogu badan yahay club-yada lagu caaweeyo maadama xaley ay aheyd habeen Axad ah oo badiyaa nighs club-yada ay galaan dadka xiiseeya.
Lawrence Kioko, oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmey qaraxaasi ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters “Waxaan maqlay qarax weyn, iyo goobta oo noqotey mugdi korontadu inay baxday ayaan u haystey, balse waxaan ka warhelay wajigeyga oo dhiig badani ka qubanayo”.
Jacub Musembi ayaa isaguna sheegay inay caawinayeen dad badan oo ku jiray kilaabka oo dhiig ka da’ayey, kuwaasi oo uu sheegay in lagu daabuley gaadiidka caafimaadka ambulances.
Link hoose ka daawo qaraxaasi goobta uu ku dhaawacmey iyo dadkii ku dhaawacmey oo qaarkood sheegayaan inay nasiib leeyihiin hadiiba ay nool yihiin. FADLAN ILMAHA YAR YAR YAANAY DAAWAN MUUQAALADA OO DHAAWACYO BADAN KA MUUQADAAN.
Ciidamada Booliiska ayaa xirey goobta qaraxu ka dhacay, waxaana taliye kuxigeenka Booliiska Kenya Charles Owino uu sheegay inaanay cidna dusha u saari karin masuuliyada qaraxa.
“Waxaynu ognahay in dad badan aaminsan fikirka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin Nairobi, laakiin tani waxay noqon kartaa xitaa muran dhanka gacansiga ah, waana wax hore oo lagu deg degay hadii aan cid dusha u saarno masuuliyada qaraxa.
Todobaadkii la soo dhaafay Kenya waxay hawlgal military ku qaaday Koonfurta Soomaaliya oo ay badi gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab, iyadoo taasi badalkeedii Shabaabku sheegeen in Kenya wajihi doonto xanuun daran oo jawaab ah u dagaalka ay ku soo qaaday goobaha ay ka taliyaan.
Dhinaca kale maalinimadiis haley safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa digniin ay soo saartey waxay ku sheegtey in ay heshay xog la isku haleyn karo oo muujinaysa in weeraro lala damacsan yahay dalka Kenya gaar ahaan goobaha ay isagu yimaadaan ajaanibta sida goobta hada la qarxiyey ee night Clubs-ka iyo waliba goobaha laga dukaamaysto (Shopping Malls). Halkan ka akhri warbixintii safaarada Mareykanka ee SBC shaley daabacdey